Others « Nipolnews
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले डिजेल र पेट्रोल र मट्टिलेतको मूल्य बढाएको हो। अब पेट्रोल १७० र डिजल १५४ प्रति लिटर काम भएको
“पृथ्वी शाह’को शंकास्पद कारोबार : ५० कारोबार, ४४ करोड’ रकम,
‘नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा परेका पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद कारोबारको विस्तृत विवरण कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । उनले ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार आठ सय
“प्रचण्ड गणतन्त्र र सङ्घीययता पिता हुन्, ओली! जस्तो थुतुनो, मात्रै चलाउने होइनन् – भीम उपाध्याय”
“काठमाडौँ । नेपाली समाजमा भीम उपाध्याय निकै चर्चित नाम हो । सामाजिक अभियन्ता भिम उपाध्याय सामाजिक कार्य संगै सामाजिक संजालमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । फेसबुकमा उपाध्यायको लाखौ
“म्यादी प्रहरी, छनौट सुरु”
“ताप्लेजुङ– आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ताप्लेजुङमा म्यादी प्रहरीका छनौट सुरु भएको छ । आजदेखि ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङमा छनौट कार्य सुरु गरेको हो । “ताप्लेजुङका लागि
अभिनेता पल शाहविरुद्ध बलात्कारको अर्को जाहेरी
अभिनेतापल शाहविरुद्ध बलात्कारसम्बन्धी अर्को जाहेरी परेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा आइतबार शाहविरुद्ध अर्को जाहेरी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेकोफ हो । यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दर्ता भएपछि पक्राउ
काठमाण्डाै – मङ्गलबारदेखि पश्चिमी भेगका केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । साेमबार बेलुकीदेखि पानी पार्ने पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली फेरि सक्रिय हुने भएकाले पश्चिम नेपालको केही
सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ । अविवाहित नारीले सुयोग्य बर पाउन तथा पतिको दीर्घायूको कामनासहित विवाहिता नारीले भगवान शिवको पूजा आरधना गर्ने गर्दछन् । यो दिन
काठमाडौं- अहिले श्री स्वस्थानीको व्रतकथा चलिरहेको छ । हरेक दिन एक–एक अध्याय घर–घरमा वाचन गरिँदै आएको पाइन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाहरुले पतिको दिर्घायूको कामना र अविवाहित महिलाले सुयोग्य बरको कामना
रामभक्त हनुमानलाई विघ्न–बाधाहरुको निवारक कर्ताका रुपमा लिइन्छ । शुद्ध–पवित्र मनले हनुमानको पूजा गर्नाले मानव जीवनमा आइपर्ने विभिन्न बाधा–अड्चनहरुको नाश हुने विश्वास गरिन्छ । जुन घरमा भगवान हनुमानजीको प्रसिद्ध मन्त्रोच्चारण हुन्छ,
आइतबार सूर्य भगवानको पूजा अर्चना गरिन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आइतबारको दिन सूर्य देवताको मन्त्र जप तथा पूजाको विशेष महत्व रहने गर्दछ । धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार आइतबारको दिनमा सूर्यअस्ताउनु
बेनी नगरपालिका–२ मा काँग्रेसले मार्यो बाजी
भरतपुरमा रोकिएको मतगणना सुचारु, के जित्लिन् त प्रचण्ड पुत्री रेणुले ?
कीर्तिपुरमा एमालेलाई पछि पार्दै काँग्रेसले लियो अग्रता